Ukunqoba kweMhlaba - Inkcazo kwiNyulo
Yintoni eyenza ukunqoba okukhethiweyo kwiindawo zezopolitiko
Ukunqoba kwimihlaba yezopolitiko yiphina ukhetho apho umnqobi anqoba khona ngegama elincinci. Leli gama lathandwa kwii-1800s ukuchaza "ukunqoba okuphazamisayo; enye inkcaso engcwatyelwa kuyo" kunyulwa, ngokubhekiselele kumlobi wezepolitiki waseNew York Times, uWilliam Safire kwi -Political Dictionary yakhe ye- Safire .
Nangona unyulo oluninzi luvakaliswa ukuwunqoba kwehlabathi, kunzima ukulinganisa.
Kukhulu kangakanani "ukunqoba okuphazamisayo?" Ingaba kukho umda othile wokunqoba owufanelekela ukhetho lonxweme? Zingaphi iivoti zokuvota kufuneka uzuze ukuphumeza umhlaba? Kuvela kungekho mvumelwano malunga neenkcukacha zehlabathi. Kodwa kukho isivumelwano esipheleleyo phakathi kwababukeli bezopolitiko malunga nolonyulo lwangaphantsi komongameli olufanelekileyo.
Kukho ubuncinci kwisigqeba sobuninzi boongameli bobukhulu abaninzi abaza kuthathwa njengama-groundlides . Phakathi kwabo nguFranklin Delano Roosevelt ngowe-1936 ukunqoba u-Alf Landon. URovelvelt watyhola amavoti angama-523 ukuya kwii-8 ze-Landon, kunye neephesenti ezingama-61 zevoti ethandwayo kuma-37 eempesheni. Ngo-1984, uRonald Reagan watyhola amavoti angama-525 kumavoti kaWalter Mondale, athabatha ama-59 ekhulwini levoti ethandwayo.
Akukho ngongoma kaMongameli uBarack Obama, ngo-2008 okanye ngo- 2012 , kuthathwa njengama-landslide. Kananjalo uMongameli uDonald Trump wanqoba uHillary Clinton ngo-2016 .
I-Trump inqobile ivoti lonyulo kodwa yafumana iigidi ezi-1 ezivotshaneyo ezingaphezu kweClinton, ukulawula ingxoxo malunga nokuba i-US kufuneka ilahle iKholeji yoNyulo .
Ukuchaza iNqoqo yoLwandle
Akukho ncazelo yomthetho okanye yomgaqo-siseko woluphi ukhetho lonxweme, okanye uluhlu olunjani lobunqamle lokunyulwa kufuneka lube khona ukuze umviwa aphumelele kwilizwe.
Kodwa abaninzi abavakalisi bezopolitiko kunye namaphephandaba abasebenzisa ikhefu basebenzisa ikhefu lokukhethwa kwemida ngokukhululekile ukuchaza imikhankaso apho umtshutshisi wayeyintando ecacileyo ngexesha lophulo kwaye uyaqhubeka ukuphumelela ngokukhululeka.
"Ngokuqhelekileyo kuthetha ukuthini ngaphezu kokulindela kwaye kunzima kakhulu," uGerald Hill, ososayensi wezopolitiko kunye nombhali-mbhali weThe Facts on File Dictionary ye-Political American , utshele i-Associated Press.
Omnye ngokuvisisana nomlinganiselo wokunyulwa komnyuba wukuthi umviwa ophumeleleyo uyabetha umchasi wakhe okanye abachasene ngamanqaku angama-15 kwipesenti ezivame ukuvota. Ngaphantsi kweso simo, i-landslide iyakwenzeka xa umviwa ophumelelayo ekhetha ukhetho lwamaqela angama-58 evoti, eshiya umdlali wakhe ngamaphesenti angama-42.
Kukho ukuhluka kweenkcazo ze-15-point landslide. Iindaba zepolitiki ze-intanethi umthombo we- Politico uye wachaza ukhetho lwamazwe njengoko kuqhutywe umviwa ophumeleleyo ngokubetha umchasi wakhe ubuncinane ngamanqaku eepesenti ezili-10, umzekelo. Kwaye i-blogger eyaziwayo yezopolitiko uNate Silver, ye -New York Times , ichaze isithili semimandla njengokuba enye ivoti yomongameli wezopolitiko ichitheka ubuncinane ngamaqondo angama-20 eempembelelo kwilizwe.
Inzululwazi yezopolitiko Hill kunye noKathleen Thompson Hill kwaye ithi i-landslide iyenzeka xa umviwa ekwazi ukuphumelela ama-60 ekhulwini kwivoti ethandwayo.
ICandelo leeKholeji zeSikolo
Ewe, iUnited States ayakhethi abaongameli bayo ngokuvota. Kunoko isebenzisa inkqubo yeCandelo leKholeji . Kukho u-538 ukhetho lokuvota oluza kubamba iqela lomongameli, ngoko bangaphi umviwa oza kuphumelela ukuphumeza i-landslide?
Kwakhona, akukho ncazelo yomthetho okanye yomgaqo-siseko we-landslide ekhetho loongameli. Kodwa iincwadana zeendaba zepolitiki zinike izikhokelo zabo eziphakanyisiweyo zokunquma ukutshatyalaliswa kwemimandla kwiminyaka. Omnye uvunyelwene ngokucacileyo kwinkcazo yeCandelo leKholeji yeeNyulo yonyulwa likamongameli apho umviwa ophumelelayo egcina ubuncinane ama-375 okanye ama-70 ekhulwini lamavoti okhetho.
Impumelelo kaChris Christie njengoGavana waseNew Jersey
UHillary Clinton kwiCandelo lePayipi le-XL
Ndiyamkela le Myalezo: Kutheni IziThutho zezopolitiko ziza ngokuzimela
I-Alternative Alternatives kwiPublic Republic Party
U-Donald Trump Wenze njani ukhetho loMongameli
Uludwe lweeNyulo zokuVotela kwangaphambili
Ngaba uDonald Trump wayengumDemokhrasi?
Iimpawu eziye zenza iVote zingenza umehluko kwiNyulo
Indlela yokusebenzisa i-German Personal Pronoun 'Es'
Kuze Uze Uyeke loo Mhla uYobhi, Funda iZifundo ezininzi kwi-It!
Izixhobo ze-ATV, iMimiselo neMithetho kaMasipala
Imfundo yoMqhubi - I-DMV - IsiGama esisisigxina sabafundi besiNgesi
Ngaba isiHlomelo sisisakhiwo seVestigial kubantu?
Iimfazwe zePunic: iMfazwe yaseLake Trasimene
Mayelana neCandelo le-Getty nguMcebisi uRichard Meier
JK Rowling Family Tree
Izifundo zoLwimi lwesiTaliyane: IziPhulo zaseTaliyane Ngama-Su, i-Con, i-Fra / Tra
Iimpawu Eziqhakamshelayo NgeMoths
Isingeniso kwi-12 Zodiac Signs: Ukusuka kwi-Aries ukuya kwiPisces
Indlela yokudlala i-1-2-3 Best Ball Tournament
Ukwakhiwa kobudala kunye namaPyramid Age
Imfazwe yeSalsa Styles
Ngaba iLimon iphilisa umdlavuza?
Ama-20 ama-R & B awona mkhulu kunabo bonke amaqela e-All-Time
10 Amanyathelo alula okuPasika ePasika